विविध Archives - Janakhabar
काठमाडौं । ४६ वर्षदेखि हङकङमा तैरिरहेको विशाल रेष्टुरेन्ट समुन्द्रमा डुबेको छ । हङकङको पहिचान बनाएर तैरिरहेको विशाल रेष्टुरेन्ट समुन्द्रमा डुबेको हो । ४६ वर्षदेखि विशाल पानी जहाजमा सञ्चालिन यो रेष्टुरेन्ट दक्षिणपश्चिम हङकङको एबर्डिनमा थियो । तर सञ्चालकले त्यहाँबाट अर्को ठाउँ (सार्वजनिक नगरिएको) मा सार्ने क्रममा रेष्टुरेन्ट प्यारासे‍ल टापु नजिक समुन्द्रमा डुबेको हो ।रेस्टुरेन्ट १ हजार […]
काठमाडौं । संसारको ठूलो माछा तिब्बत हुँदै बग्ने नदीमा नै फेला परेको छ । कम्बोडियास्थित मेकङ नदीमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आकारको ताजा पानीमा पाइने माछा फेला परेको हो । नदीमा पाइएको उक्त क्याटफिस जातको माछाको तौल ३ सय केजीको छ ।यसअघि सन् २००५ मा थाइल्याण्डस्थित मेकङ नदीमा पाइएको २ सय ९३ केजीको क्याटफिस माछा विश्वको […]
काठमाडौं । पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीले एक नवजात शिशुको टाउको काटेर आमाको पेटभित्रै छोडिदिएपछि ३२ वर्षीया महिलाको ज्यान जोखिममा परेको छ । उक्त दुखद घटनाबारे छानविन गरी दोषी पत्ता लगाउन सिन्ध सरकारले मेडिकल जाँच बोर्ड गठन गरेको छ । ‘थरपार्कर जिल्लाको दूर गाउँकी हिन्दू महिला पहिले आफ्नो क्षेत्रको ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र (आरएचसी) […]
काठमाडौं । भारत, उत्तर प्रदेश (युपी) को कन्नौजमा बस्ने १० कक्षा उत्तीर्ण गरेकी एक महिलाले आफ्नो खेतमा पानी जम्ने समस्या यसरी सामना गरिन् कि अहिले सबैले तारिफ गरिरहेका छन् । विपद्लाई अवसरमा परिणत गर्दै उनले खेतलाई नै सानो टापु बनाइन् । आजतकको रिपोर्ट अनुसार कन्नौजको तिरवा तहसीलको बुथैयान गाउँकी किरण कुमारी राजपूतको उमर्दा ब्लकको गुंडाहा […]
काठमाडौं । कोलम्बियामा प्रहरीले १३ सय किलोग्रामभन्दा बढी कोकिन बरामद गरेको छ । यसको मूल्य २ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख नेपाली रुपैया भन्दा बढी पर्ने कोलम्बिया प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । अमेरिकामा एक केजी कोकिनको मूल्य १४ हजार ५ सय डलभन्दा बढी पर्छ । एक केजी को नै १७ लाख ९८ हजार रुपैया मूल्य […]
काठमाडौं । बेलायतका स्टिभ किलरले यस्तै अपत्यारिलो कार्य गरेका छन् । पेसेवर मार्शल कलाकारले एउटा औँलाले सबैभन्दा भारी सामान उठाउने यसअघिको विश्व कीर्तिमान तोडेका छन् । १० वर्ष पुरानो रेकर्डलाई उनले तोडेका हुन् । उनले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा केन्टमा रेकर्डका लागि प्रयास गरे र आफ्नो दाहिने हातको बीचको औंलाले १२९.५ केजी उचाल्न सफल भए […]
काठमाडौं । चीनका रुआन लियांगमिंगले आफ्नो शरीरलाई झण्डै साढे ६ लाख वटा मौरीको गोलोमा बदलेर गिनिज बुकमा नाम लेखाएका छन् । लियांगमिंगले आफ्नो पूरै शरीरलाई मौरीले छोपिदिए । सोसल मिडियामा मौरीको गोलो बनेको उनको शरीरको तस्वीर तथा भिडियोहरू भाइरल बनिरहेका छन् । रुआनले कीर्तिमान रच्नका लागि एउटा रानी मौरीलाई सुरुमा आफ्नो शरीरमा राखे । त्यसपछि […]
२०७९ जेष्ठ २६ गते, बिहीबार
कार्यकक्षमै मन्त्रीको हत्या !
काठमाडौं । डोमिनिक रिपब्लिकका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन मन्त्रीको आफ्नै कार्यलयभित्र गोली हानेर हत्या भएको छ । ओलान्डो जोर्ग मिरालाई एक निकट साथीले गोली हानेर हत्या गरेका हुन् । आक्रमण हुँदा ५५ वर्षीय ओरलान्डो बैठकमा सहभागी थिए । उनीमाथि ६ राउन्ड गोली प्रहार गरिएको थियो । आत्रलमणकारी मिगुल क्रुज मन्त्री ओलान्डोका बाल्यकालदेखिकै साथी भएको राष्ट्रपतिका […]
विश्वविद्यालयद्वारा बिरालोलाई बधाई !
काठमाडौँ । अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयले आफ्नो मालिकसँग जुम कक्षाको हरेक लेक्चरमा भाग लिएको बिरालोलाई बधाई दिएको छ । महामारीका कारण फ्रान्सेस्का बोर्डियरले कलेजको अधिकांश समय घरबाटै जुम कक्षा लिएकी थिइन् । ‘म धेरैजसो समय मेरो अपार्टमेन्टमा थिएँ र मेरो छेउमा मेरो बिरालो (सुकी) हुन्थिन । जब म मेरो जुम लेक्चरमा हुन्थे, उनी पनि नजिकै आएर […]
खानाको लडाइँले मेगालोडन सार्कको लोप !
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरूले प्रागैतिहासिक खानाको लडाइँले मेगालोडोन सार्कको लोप भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन । महासागरको विशाल मेगालोडनको जीवाश्म दाँतहरूको अध्ययनले यो सुझाव दिन्छ कि यसले अर्को क्रुर शिकारी ठूलो सेतो सार्कसँग खानाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने थियो । ह्वेल र अन्य शिकारको लडाइले मेगालोडोनलाई तीस लाख वर्षअघि लोप हुनेतर्फ धकेलिएको हुनसक्ने सोधकर्ताहरूको भनाई छ […]
२०७९ जेष्ठ १८ गते, बुधबार